Ukucatshangelwa Kwe-Screw Ne-Screw Slip Solutions
Akulula ukuhlela isikulufa esinomsebenzi omuhle kakhulu ohlangabezana nokucacisiwe okungenhla. Ekuhleleni kwesikulufa, kufanele kubhekwe lezi zinto ezilandelayo 1. Izici zezinto ezibonakalayo kanye nobume bawo obuningana, ubukhulu kanye namazinga okushisa ngesikhathi sokufakwa. Izici ezingokwenyama ze ...
Njengamanje, izinto ezisetshenziselwa isikulufa e-China yizinsimbi ezingama-45, i-40Cr, i-ammoniated iron, i-38CrMoAl, i-alloy lokushisa eliphakeme, njll. 1) No. ukumelana akulungile. Ukwelashwa kokushisa: Kuqediwe futhi ...
Isingeniso Esakhiweni Nasekusetshenzisweni Kwesikulufa Esisha
1 、 Ukwakheka nokusetshenziswa kwesikulufu esihlukanisiwe Ukwakheka kwesikulufa esihlukanisiwe kubonakaliswa ngokufaka izimbambo engxenyeni encibilikayo, kuhlukaniswa isigcini esikhulu sesikulufa izingxenye ezimbili, kwakha isigaba sokuqina se-solid-liquid ngesikhathi senqubo yokufaka ipulasitiki, sishiya konke uqinile m ...